Thwebula KeePass 2.30 Professional futhi Portable... – Vessoft
KeePass – a isofthiwe enamandla ukugcina amaphasiwedi, -akhawunti kanye nedatha ezihlukahlukene ifomu ezifihliwe. Isofthiwe ikuvumela ukuphatha amaphasiwedi amaningi futhi uwugcine endaweni database ukuthi ivaliwe by the ifayela key noma ekhethekile ezinkulu unique. KeePass isekela ubuchule ephephile sokuzivikela encipher amaphasiwedi of yolwazi nokuphathelene. Isofthiwe ikuvumela ukuba uzitholele futhi ukuguqula database in ngetakhiwo letehlukene ifayela. KeePass iqukethe inqwaba amathuluzi ukumisa iphasiwedi generator, ngicinga futhi uphenya amaqembu ehlukahlukene.
Sekela ephephe ukubethela ubuchule
Akhiwa-in iphasiwedi generator
Inguqulela database in ngetakhiwo letehlukene
Amazwana on KeePass:
KeePass Ahlobene software: